Wasaaradda Awqaafta XFS oo agab looga hortago covid-19 uqeybisay bulshada Gobolka Banaadir+Sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By C/raxman maxamed Ibrahim / May 28, 2020 May 28, 2020
Muqdisho (SONNA)-Wasiir ku xigeenka wasaaradda Awwaafta iyo Arrimaha Diinta Cismaan Aadam Dhuubow ayaa maanta kormeer ku tagay degmooyin ka tirsan 17 dagmo ee gobolka Banaadir.halkaasi oo ay howl-wadaneeda wasaaradda ay ka wadeen ololaha wacyigalinta ka hortaga cudurka covid -19.
Wasiir ku xigeenka iyo masuuliyiinta kale ayaa tagay degmooyinka Shangaani,Shibs,Kaaraan iyo Cabdicasiis iyadoo dadka loogu tagayay goobaha ganacsiga sida suuqyada iyo goobaha dadka ay isugu yimaadeen waxaana loo qeybinayay maryaha afka lagu xerto ee ( fase maaska) sidoo Kalane laga siinyay talo oyin ka aadan qatarta uu leeyahay cudurkaan safmarka ah Karoona Feyrus.
Sido kale wasiir ku xigeenka Wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Xukumadda Federaalka Soomaaliya Cismaan Aadan dhuuboow oo la hadlay warbaahinta ayaa bogaadiyay howsha adag oo ay bulshadooda u hayaan shaqaalaha Wasaaradda madaama aysan galin fasax si ay qeyb-uga noqdaan ololaha lagula dagaalamayo cudurkaan caalamka aafeeyay ee covid-19.
“Tan iyo markii aan bilaawnay ololahaan wacyigalinta dadku waa ay fahmeen qatarta covid-19 maxaa yeelay iyaga ayaa naga codsanaya in aan siino agabka looga gaashaanto cudurkaan sidoo kale waxaan bogaadinayaa howl-wadeenada wasaaradda oo har iyo habeenba u taagan in ay dadkooda u adeegaan”sidaa ayuu yiri wasiir Cismaan Aadan dhuuboow.
Tan iyo markii dowladda Soomaaliya waxaa ay Wasaaraddu ka mid aheyd dadka ka shaqeyneynayay ololaha wacyigelin oo looga hortagayo Covid19 taasi ay oo ay iska kaashanayaan dhamaan Hay’addaha Dowladda.